Vaviri Chikamu Chemugwagwa Kumaka Mashini Vagadziri | China Chemuviri Chikamu Chinoisa Mashini Muchina Fekitori & Vatengesi
—— Makemikari maviri eChiratidzo Chemugwagwa -
200HS Cold Plastic Spray Machine, MMA 1: 1, yakavhenganiswa Mukati
Tiri China chikuru nyanzvi mugadziri uye fekitori yechando epurasitiki pfapfaidzo muchina yakavhenganiswa mukati. yekumberi kukatyamadza kudzikisira system, iyo isina kuremerwa yakagadziriswa chishandiso cheyaizi, inotumirwa kamwene, inoenderera kutonhora sisitimu, Chinhu chinoumba B chikamu Static kusanganisa mudziyo uye otomatiki nekukurumidza yekuchenesa mudziyo, nezvimwe.
250DC Yega Inofambiswa Nzira Yekumaka Machine
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yemayo-enjiniya yemumigwagwa yekumaka michina. Iyo inokodzera kwazvo kune nhandare, matunhu, vanofambisa, kana chero munhu anoda zvionekedzo kana mamwe maviri-mavara mitsara. Nepo panguva imwe chete uchimwaya maviri mavara mune iyo pateni, iyo kugadzirwa uye kuchinjika kwekumaka kunotsanangurwa patsva, uye iyo yakanyanya upamhi hwepateni iri kusvika pamasendimita makumi mapfumbamwe.
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori ye ……
LXD Maviri-echikamu eMugwagwa Ekumaka Machine
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yemaviri-echikamu emigwagwa yekumaka michina. Iine midziyo miviri yepende A uye inonongedza B, iyo inogona kusanganiswa pamwechete nekumhanyisa mudziyo. iyo inomutsa mudziyo inogona kumhanyisa otomatiki, iyo inotsigirwa nesimba simba.
Maviri Ezvinhu Ribvu Mutsara Road Yekumaka Machine
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yezvinhu zviviri-zvembabvu mutsetse wemigwagwa yekumaka michina. Rubha vhiri: mavhiri esimbi, Yekudzivirira-kupisa rabha, Yekuseri muswe vhiri rakagadzirwa neanomira, kuti iite kufamba munzira yakatwasuka. Main Kugadziridza: 1 yekufambisa kutyaira unit-USA2 Solenoid vharafu-Italy3 Mhepo compressor-Taiwan4 modulator-Germany5 Mhepo humburumbira-Italy
200HS Maviri Chikamu Chemugwagwa Spray Machine
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yezvinhu zviviri-zvemumugwagwa nzira yekupfira michina. main kumisikidza: pombi mbiri, hydraulic injini yekutyaira sisitimu, inoenderera ichishanduka hutachiona system.
Makompawundi maviri eMigwagwa yekumaka Mashini Kune Flat Line, Mbiri Line Uye Agglomerate Line
Isu tiri nyanzvi huru yeChina yekugadzira uye fekitori yemaviri-echikamu emigwagwa yekumaka muchina wetara mutsetse. Rubha vhiri: simbi vhiri, Inodziya isingagone rabha yakagadzirirwa-yakagadzirwa, Yeashure muswe vhiri inopihwa ne locator, chengetedza muchina uchifamba munzira yakatwasuka.
Rori Rakatasva Maviri Chikamu Spray Machine
Isu tiri China hombe nyanzvi yekugadzira uye fekitori yemarori-akaisirwa maviri-echinhu chipfira michina. RoadLazer RoadPak Sisitimu ndeye hydraulic striping system yakavakirwa yehunyanzvi mugwagwa wekubvisa muvaki. NeRoadPak isina mhepo yekumabura sisitimu, iwe unogona kuwana zvakanyatsoita mitsara pakumhanya kunogadzira - kusvika 10 mph (16 km / h).